श्रृंखलाको सपनाः नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने ! के भन्छन् क्लासमेटहरु ? « News24 : Premium News Channel
श्रृंखलाको सपनाः नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने ! के भन्छन् क्लासमेटहरु ?
श्रृङ्खलाको मिस वल्र्ड प्रतिस्पर्धासम्मको यात्रा
काठमाडौं । आफ्नो देशलाई विश्वमाझ चिनाउने गरी मिस वल्र्डमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपाली चेली श्रृङखला खतिवडाले प्रस्तुत गरेको भिडियो हो, यो । अहिले मिस वल्र्ड प्रतिस्पर्धी श्रृङ्खलासँगै उनले आफ्नो परिचयमा देशको परिचय घोलेर प्रस्तुत गरेको भिडियो निकै चर्चित छ ।
हो, नेपाली चेली श्रृङखला खतिवडा अहिले मिस वल्र्डका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् । चीनको सान्या सहरमा भइरहेको मिस वल्र्ड प्रतिस्पर्धामा सहभागी विश्वका एक सय २१ सुन्दरीमध्ये श्रृङ्खला अन्तिम ३० मा पुग्न सफल भएकी छन् । र, बाँकी प्रतिस्पधीलाई उछिन्दै मिस वल्र्डको ताज पहिरने तयारीमा छिन्, उनी ।
उनले सन् २०१८ मा मिस नेपाल वल्र्डको ताज पहिरिदिएकी थिइन् । मिस नेपालका २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै श्रृङ्खलाले मिस वल्र्डको यात्रा तय गरेकी थिइन् ।
उनी अहिले मल्टिमिडिया विधामा सफलता हात पार्दै मिस वल्र्डको फाइनल चरणमा पुगेकी छन् । मिस वल्र्डको आधिकारिक फेसबुक पेजका अनुसार मिस वल्र्डको मल्टिमिडिया बिधाको उत्कृष्ट ३ मा नेपालकी श्रृङ्खलासँग र मेक्सिको र केन्याका सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जहाँ श्रृङ्खला उक्त बिधाको अवार्ड हात पार्न सफल भइन् ।
त्यसपछि सोमबार भएको ब्यूटी वीथ प्रपोजको अवार्ड जित्न पनि श्रृङ्खला सफल भइन् । जहाँ उनले नेपालको मकवानपुरस्थित अतिदुर्गम तथा विपन्न चेपाङ बस्तीमा हेल्थ पोस्ट स्थापना गरेको वृत्तचित्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जुन भिडियोले श्रृङ्खलालाई ब्यूटी वीथ प्रपोजको अवार्ड दिलायो ।
आईतबार भएको हेड टु हेड प्रतिस्पर्धामा भने श्रृङ्खलाले अवार्ड हात पार्न सकिनन् । जसले मिस वल्र्डको फाइनलमा पुग्ने उनको आशामा तुषारापात भएको थियो । तर जब उनले थप दुई वटा अवार्ड जितिन्, तब मिस वल्र्डको सपना ब्युतियो । हेड टू हेडमा अवार्ड हात पार्न नसकेपछि श्रृङ्खलाले फेसबुकमार्फत भाबुकहुँदै फ्यानसँग माफी मागेकी थिइन् ।
मिस वल्र्डको फाइलन डिसेम्बर ८ अर्थात् मंसिर २२ गते शनिबार हुँदैछ । जहाँ श्रृङ्खलाले मिस वल्र्डको ताज पहिरिएको हेर्न उनका फ्यान, अलोअर्ससँगै अधिकांश नेपाली लालायित छन् ।
मिस वल्र्डकी दावेदार श्रृङ्खला खतिवडाको पुख्र्यौली घर मकवानपुरको हेटौँडा हो । श्रृङ्खलाका बुवा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिरोध खतिवडा हुन् भने आमा प्रदेश नम्बर ३ की प्रदेश सांसद मुनु सिग्देल हुन् ।
हेटौँडा एकेडेमीबाट प्रवेशिका उतीर्ण गरेकी श्रृङ्खलाले गोल्डनगेट इन्टरनेशनल कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकी हुन् । कविता लेख्नमा निकै रुचि राख्ने उनको सपना भने नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्ने छ । सन् २०१८मा मिस नेपाल वल्र्ड बनेपछि उनले मिस वल्र्डमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकी हुन् ।
साथीको नजरमा श्रृङ्खला
विश्वभरका १ सय २१ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मिस वल्र्डको फाइनलमा पुग्न सफलः नेपाली चेली श्रङ्खला खतिवडाको सर्वत्र चर्चा छ । श्रृङ्खलाको सफलतालाई धेरैले देशको सफलता मानेका छन् ।
श्रृङ्खलाको सफलतामा उनको परिवार, आफन्त, फ्यान, फलोअर्ससँगै अधिकांश नेपाली खुसी छन् र श्रृङ्खला मिस वल्र्ड भएको हेर्न आतुर छन् ।